IMount Olympus on Mars, enkulu kunazo zonke kuSolar System | Isimo Sezulu Senethiwekhi
INtaba i-Olympus evela eMars
Lapho sibona ezinye zezintaba ezinkulu nezinkulu kunazo zonke emhlabeni wethu, njenge Izintaba ze-Appalachian futhi i uhla lwezintaba ze-himalayan, sicabanga ukuthi ayikho into ephakeme kunayo. Futhi kungenxa yokuthi ngeke sibe nephutha kakhulu kulokho. Yize umhlaba uwukuphela kweplanethi okungahlalwa kuyo emhlabeni Uhlelo lomkhathi, akuyona yodwa enama-morphologies athakazelisayo nezakhiwo zokwakheka komhlaba. Namuhla sithuthela kwiplanethi Mars, lapho sinentaba-mlilo enkulu kunazo zonke ezaziwayo kuSolar System. Imayelana ne- INtaba i-Olympus.
Ungaphuthelwa yiyo yonke imininingwane ngale volcano enkulu, umsuka wayo nokuthi itholwe kanjani.
2 Usayizi nokuma
3 Umsuka weNtaba i-Olympus
Iplanethi iMars ibinesithakazelo esikhulu kubantu selokhu yatholakala. Kunezifundo eziningi kanye nohambo olwenziwe ngamacwaningo olwenziwe ukuthola hhayi kuphela indawo kepha nengaphakathi lomhlaba. Okwamanje, uphenyo lwe-InSight lufikile eMars ukuzobona konke okungaphakathi. Izithombe ezingcono nolwazi oluthe xaxa lungaqoqwa njalo uma kunikezwa ukuthuthuka okukhulu kwezobuchwepheshe esihlangabezane nakho emashumini eminyaka amuva nje.
INtaba i-Olympus yayivele isaziwa ngohambo lwasendulo, ngoba umkhumbi-mkhathi wasondela kuleplanethi futhi wawungabonakala. Kodwa-ke, imininingwane yalobu bukhosi yayingaziwa kahle. Iyintaba-mlilo encane kunazo zonke emhlabeni obomvu futhi selakhiwe cishe eminyakeni eyizigidi eziyi-1.800 edlule.
Ine-massif emaphakathi ne ukuphakama okukhuphuka kuze kufike cishe ku-23 km ukuphakama. Siyakhumbula ukuthi isiqongo esikhulu kunazo zonke eMhlabeni asidluli ku-9 km. Kuzungezwe ithafa elikhulu elibazungezile. Kuyabonakala ukuthi itholakala ekucindezelekeni kokujula kwamakhilomitha ama-2 futhi kunamawa amaningi amakhulu aphakeme cishe nge-6 km. Cabanga usayizi wale ntaba-mlilo, uma kuqhathaniswa nalokho esinakho eMhlabeni. Iwa elilodwa liphakeme kunanoma iyiphi isiqongo kuyo yonke iNhlonhlo Yase-Iberia.
Phakathi kwezici zengaphakathi lentaba-mlilo, siyabona ukuthi i-caldera yayo inayo ubukhulu be-85 km ubude, i-60 km ububanzi futhi icishe ibe ngu-3 km ukujula. Kuyisilo ngempela sentaba-mlilo okufanele usibone, ngisho nasezithombeni. Inezinsimbi eziyisi-6 ezakhiwe ngezikhathi ezahlukene zonyaka. Isisekelo sentaba-mlilo singamakhilomitha angaba ngu-600 ububanzi.
IMount Olympus uma bekuseSpain
Uma sibona ingqikithi yesisekelo, siyakubona lokho Ihlala endaweni engamakhilomitha-skwele angama-283.000. Lokhu kuyafana nendawo yengxenye yeNhlonhlo Yase-Iberia. Kunzima ukucabanga ngalezi zilinganiso, ngoba zinkulu kakhulu. Intaba-mlilo ehlala uhhafu weSpain akuyona into elula ukuyicabanga. Empeleni, ubukhulu bayo bungangokuthi uma besingalandela inhlabathi yeMars, besingeke sikwazi ukubona ukuma kwentaba-mlilo ngokuphelele. Noma besingasuka, besizobona udonga olufana newa elikhulu.
Kungabonakala ngokuphelele ngokuphelele phezulu, ngoba ukugobeka kweplanethi kungabeka umkhawulo wethu ekubukekeni. Thanda Ayikwazi ukubonwa ngokuphelele kusuka phansi, ngisho nangaphezulu. Uma besingahlala esiqongweni esiphakeme kakhulu sentaba-mlilo, besingabona kuphela ingxenye yomthambeka wayo. Besingazukubona ukuphela, ngoba bekuzohlangana kufinyelele emkhathini. Uma sifuna ukubona iNtaba i-Olympus ngokuphelele, okuwukuphela kwendlela kusuka emkhathini emkhunjini.
Ukuhlaziya uhlobo lwentaba-mlilo eyiNtaba i-Olympus, singakusho lokho uhlobo lwesihlangu. Izintaba-mlilo ezingamaShield zibonakala ngokuba banzi futhi zibe zinde futhi zibe nomumo oyindilinga nophansi. Zifana kakhulu nezintaba-mlilo zaseHawaii.
Usayizi omkhulu kangaka unencazelo yawo nemvelaphi yawo. Futhi ukuthi amandla weplanethi awasebenzi ngendlela efanayo neyethu. Awunayo amacwecwe e-tectonic ezinyakazayo futhi zihambisa uqweqwe lwamazwekazi. Ngalesi sizathu, iNtaba i-Olympus ibilokhu idala udaka endaweni efanayo futhi ibilokhu iqina, ithola usayizi ongaka.
Umsuka weNtaba i-Olympus
Njengoba sazi, le ntaba-mlilo enkulu kuye kwaba ngophenyo ukuze kutholakale umsuka wayo. Ukuqhuma kwentaba-mlilo kucatshangwa ukuthi kwakha umgodi njengoba unjalo namuhla. Njengoba iMars ingenawo amapuleti ama-tectonic, ingaphezulu lilungisiwe. Ngale ndlela, udaka oluxoshiwe seluqine lwakha lolu sizo.
Le volcano iguqule bonke ubuso beMars. Imfucumfucu yasentabamlilo yiyona eyakha ithafa elikhulu elilele ezansi kommango, obizwa ngokuthi ithafa elikhulu laseTarsis. Yindawo engamakhilomitha-skwele angu-5.000 12 no-XNUMX km ukujula, kucatshangelwa ukuthi iplanethi ebomvu ibukhulu obuyisigamu njengobethu. Lokhu kushintsha indlela iMars ebukeka ngayo ngokuphelele.
Isenzo sengcindezi salesi sigcawu esikhulu besisusa ungqimba lomhlaba futhi sihambisa zonke izindawo zoqweqwe lwenyakatho. Ososayensi bakholelwa ukuthi ngenxa yokuvela kwale ntaba-mlilo nokwakheka kwayo kancane, izingongolo zeMars azisekho ezigxotsheni, futhi zonke izindlela zemifula sezishintshile kangangokuthi zafa.
Ukube kwenzeka into efana naleyo emhlabeni wethu, idolobha laseParis belizoba yingxenye yombuthano wePolar, ngoba iNtaba i-Olympus ibizobe isuse wonke umhlaba.
Lokho ososayensi abakubonayo ukuthi le ntaba-mlilo enkulu, ingaphinde iqhume njengoba ucwaningo oluthile luphetha. Kuyamangalisa ukuthi kwamanye amaplanethi, akukho okunye ngaphandle kokuba nolunye uhlobo lwe-dynamics okungadala ukwakheka kwalolu hlobo ukuthi kuvele. Iqiniso lokuthi iMars inezinye izinto eziguquguqukayo ngaphakathi futhi ayinayo leyo misinga yokudlulisa amanzi ehambisa amapuleti e-tectonic, into eyodwa njenge-volcano, kungadala ukwakheka okukhulu okuyenza intaba enkulu kunazo zonke eSolar System.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » INtaba i-Olympus evela eMars
Amachibi Amakhulu ENyakatho Melika